ENGLISH FOR SUCCESS: Eight Parts of Speech အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
Eight Parts of Speech အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
ပထမဦးဆုံး စတင်ဆွေးနွေးလိုတာကတော့ အင်္ဂလိပ်စာရဲ့ အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ Eight Parts of Speech ကို ဆွေးနွေးလိုပါတယ်. မြန်မာသဒ္ဒါမှာတော့ ၀ါစက (၈) မျိုးလို့ ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. အဲဒါတွေကတော့
1. Noun (နာမ်)
2. Pronoun (နာမ်စား)
3. Verb (ကြိယာ)
4. Adverb (ကြိယာဝိသေသန)
5. Adjectives (နာမ၀ိသေသန)
6. Preposition (ရှေ့ဆောင်ပုဒ် (၀ါ) ၀ိဘတ်)
7. Conjunction (စကားဆက် (၀ါ) သမ္ဗန္ဓ)
8. Interjection (အာမေဍိတ်)
အဲဒီ့ ၀ါစက ရှစ်မျိုးကို အသုံးပြုပြီးတော့ ၀ါကျများကို တည်ဆောက်ထားခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ. ဒီ ၀ါစကရှစ်မျိုးကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ တတ်မြောက်ရင်တော့ English Grammar ကို ပိုင်နိုင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းအများကြီး ရှိသွားပါပြီ.
နာမ်လို့ ခေါ်ပါတယ်. အမည်နာမကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်. ဒါကတော့ အားလုံး ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားပဲ ဖြစ်ပါတယ်. Noun ကို ထပ်မံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားတာတွေ ရှိပါသေးတယ်.
Combined Nouns စတာတွေ ရှိပါသေးတယ်. အဲဒါတွေကိုတော့ နောက်မှပဲ အသေးစိတ် ဆွေးနွေးပါဦးမယ်.
Definition လေးနဲ့ ပြောရရင်တော့
A word which isaperson, place, thing or idea.
e.g. Johnny, Rangoon, Giraffe (သစ်ကုလားအုတ်), Ostrich (ငှက်ကုလားအုတ်), Camel (ကုလားအုတ်), Cuckoo (ဥဩ)… စသည်တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
နာမ်အစားသုံးတဲ့ ပုဒ်ကို နာမ်စားလို့ခေါ်ပါတယ်.
A word that is used to take the place ofanoun.
e.g. I, they, their, ourselves, itself, your, my, nobody, who, which, her, we
(i) Angelina Jolie is an amazing actress. She helps the poor as much as she can.
(ii) A dog never bites its feeding hands.
3. Adjective (နာမ၀ိသေသန)
နာမ်၏ ရှေ့မှဖြစ်စေ၊ နောက်မှဖြစ်စေ နာမ်ကို အထူးပြုနေသော ပုဒ်၊ စကားလုံးကို နာမ၀ိသေသနလို့ ခေါ်ပါတယ်.
A word that is used to describeanoun or pronoun.
e.g. proud, purple, French, few, this, huge, sad, second, none
မြင်း… ဘယ်လိုမြင်းလဲ… မြင်းဖြူ… ဒီနေရာမှာ white ဆိုတဲ့ စကားလုံးက Horse ဆိုတဲ့ Noun ကို အထူးပြုနေတယ်. ဘယ်လို Horse ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်.
He won the first place in the competition.
ပြိုင်ပွဲမှာ နိုင်တယ်. ဘယ်လိုနိုင်လဲ. ပထမနေရာကိုရတယ်. ဒီနေရာမှာ place ဆိုတဲ့ noun ကို first ဆိုတဲ့ စကားလုံး က အထူးပြုနေတယ်. ဘယ်လိုနေရာကို ရရှိတယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြနေပါတယ်. ဒါကြောင့် first ဟာ adj ဖြစ်တယ်.
4. Verb (ကြိယာ)
ပြုခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ ဖြစ်ခြင်းကိုဖြစ်စေ၊ ရှိခြင်းကိုဖြစ်စေ ပြသောပုဒ်ကို ကြိယာဟုခေါ်သည် လို့ မှတ်သားခဲ့ဖူးပါတယ်.
A word that indicates an action, being or state or being.
e.g. play, run, think, study, smell, wait, be, drive, announce, blog
U Mya feels proud of his daughter when she is chosen for the school’s choir.
(choir ဆိုတာက ကျောင်းတွေ၊ Church တွေမှာ အုပ်စုလိုက် သီချင်းဆိုတဲ့ အဖွဲ့မျိုးကို ခေါ်ပါတယ်.)
5. Adverb (ကြိယာဝိသေသန)
ကြိယာ၏နောက်မှဖြစ်စေ ရှေ့မှဖြစ်စေ ကြိယာ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို လေးနက်စေရန် အထူးပြုသောပုဒ်ကို ကြိယာဝိသေသနဟု ခေါ်သည် လို့ မြန်မာသဒ္ဒါက ဆိုထားပါတယ်.
A word that is used to describeaverb which tells how, where, or when something is done.
e.g. carefully, often, very, intelligently, quite, too, rarely, never.
Since it is raining, Zaw Zaw drives his care carefully.
ဇော်ဇော်ကားမောင်းတယ်. ဘယ်လိုမောင်းလဲ. သတိထားမောင်းတယ်. ဒီနေရာမှာ carefully ဆိုတဲ့ စကားလုံးက drives ဆိုတဲ့ verb ကို အထူးပြုနေတယ်. ဘယ်လိုမောင်းတယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြနေတယ်. ဒါကြောင့် carefully ဟာ adverb ဖြစ်တယ်.
Don’t be superstitious! Ghost never exists.
အယူမသည်းစမ်းပါနဲ့. သရဲဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဖူးဘူး.
ဒီနေရာမှာ never ဆိုတဲ့ စကားလုံးက exists ဆိုတဲ့ ကြိယာကို အထူးပြုနေပါတယ်. မရှိခဲ့ဖူးဘူး. ဘယ်လိုမျိုးလဲ. ဘယ်တုန်းကမှ မရှိခဲ့ဖူးဘူးလို့ အလေးအနက်ထားပြီး ပြောလိုက်တယ်. ဒါကြောင့် never ဟာ adverb ဖြစ်တယ်.
6. Preposition (ရှေ့ဆောင်ပုဒ် (၀ါ) ၀ိဘတ်)
၀ိဘတ်ဆိုတာ နာမ် (သို့မဟုတ်) နာမ်စားတစ်ခုရှေ့မှာ ထားရတဲ့ စကားလုံးဖြစ်ပါတယ်. ဘာကြောင့်ထားရသလဲ ဆိုရင် အဲဒီ့နာမ်၊ နာမ်စားနဲ့ အခြားနာမ်၊ နာမ်စားတို့ရဲ့ ဆက်သွယ်ပုံကို ဖော်ပြပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်.
A word used indicating the relationship ofanoun or pronoun to another word.
e.g. in, until, of, from, after, under, beyond, across, toward
The baby is in the cradle.
ကလေးငယ် ပုခက်ထဲမှာ ရှိနေတယ်. ဒီနေရာမှာ in ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ ဘာကိုပြောသလဲဆိုတော့ ကလေးငယ်ဆိုတဲ့ နာမ်နဲ့ ပုခက်ဆိုတဲ့ နာမ်နှစ်ခုကြားက ဆက်သွယ်မှုကို ဖော်ပြနေပါတယ်. ဘယ်လိုဖော်ပြနေလဲ.
ကလေးငယ်ဟာ ပုခက်… ဘာလဲ….
ပုခက်ထဲမှာလား. ပုခက်ပေါ်မှာလား. ပုခက်အောက်မှာလား… in တဲ့ . ပုခက်ထဲမှာပါလို့ ပြောလိုက်တယ်. ဒီလိုမျိုး Noun နှစ်ခုရဲ့ ဆက်သွယ်မှုကို ဖော်ပြပေးလို့ in ဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ preposition ဖြစ်တယ်.
စကားဆက်ဆိုတာ ဆက်သွယ်ပေးတဲ့ စကားလုံးပါ. စကားလုံးတစ်လုံးကို အခြားစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့၊ ၀ါကျတစ်ခုကို အခြားဝါကျတစ်ခုနဲ့ ဆက်သွယ်ပေးပါတယ်.
A word that is used to join words or groups of words.
e.g. and, or, but, neither, because, while, since, although
Physics and Chemistry are science subjects.
Phyiscs နဲ့ Chemistry ဆိုတဲ့ နာမ်နှစ်ခုကို ဆက်ထားတယ်. ဒါကြောင့် and ဟာ conjunction ဖြစ်တယ်.
I can’t do this but I will do this because I love you so much.
I can’t do this. I will do this. နဲ့ I love you so much ပါ.
အဲဒီ့သုံးကြောင်းကို ဆက်ထားပါတယ်. ဒါကြောင့် but နဲ့ because တို့ဟာ conjunction တွေဖြစ်ပါတယ်.
8. Interjection (အာမေဋိတ်)
စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပြင်းပြတဲ့ ရုတ်တရက် ခံစားချက်တွေကို ဖော်ပြဖို့ သုံးတဲ့ စကားလုံးတွေပါပဲ.
A single word used to express strong emotion.
e.g. Wow! Ah! Oh! No! Oh my God! Bravo! Whatapity!
Wow! Look at that! It’s unbelievable. My blog is on google.
ကဲကဲ. ဒီလောက်ဆို အားလုံး သဘောပေါက်လောက်ပြီ ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ. မပေါက်သေးရင်လည်း နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ဖတ်စေချင်ပါတယ်. မရှင်းလင်းတာများကို ကော်မန့်မှာ ၀င်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်.
ဖတ်ပြီးရင်တော့ ဒီ exercise လေးကို ကြိုးစားဖြေကြည့်ပါခင်ဗျာ. အဖြေမှန်ကို နောက်ရက်မှာ တင်ပေးသွားပါမယ်.
ဒီအောက်က စာကြောင်းတွေမှာ ဘယ်ဟာက noun, pronoun, verb, conjunction စသည်ဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ပါပဲ. ကဲ. စပါပြီ.
ဒီစာကြောင်းလေးတွေထဲမှာ အဆင့်မြင့်တဲ့ မြုပ်ကွက်လေးတွေလည်း ထည့်သွင်းထားပါသေးတယ်. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာနေသူများဟာ Level အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ပါပဲ. အားလုံးတစ်စုံတစ်ခုကိုတော့ ရသွားစေချင်ပါတယ်. ဒါကြောင့် ကြိုးစားပြီး ဖြေဆိုကြည့်စေလိုပါတယ်ခင်ဗျာ.
1. Naing Ye comes fromarich family. He is well-raised by his father.
2. The poet writes poems while the composer composes the songs.
3. Ouch! Take it easy, man! It really hurts.
4. Among many actors, Arnold is not only the actor but also the politician.
5. Love is stronger than justice.
6. Art isamarriage of the conscious and the unconscious.
7. I sawasaw onasaw.
8. It takesalong time to become young.
9. Man is the only animal that laughs and hasastate legislature. (Samuel Butler)
10. We forfeit three-fourths of ourselves in order to be like other people. (Arthur Schopenhauer)
11. Love is composed ofasingle soul inhabiting two bodies. (Aristotle)
12. As for me, all I know is that I know nothing. (Socrates)
13. A good decision is based on knowledge and not on numbers. (Plato)
14. I am not an Athenian oraGreek, butacitizen of the world. (Diogenes)
15. Character is long-standing habit. (Plutarch)
မေးချင်တာလေး မေးသွားပါတယ်။ ဒီပို့စ်နဲ့မဆိုင်လို့ ခွင့်လွှတ်ပေးစေချင်တယ်။
သိုးလေးက ဆိုင်မှာ အင်တာနက်သုံးရတာဖြစ်လို့ တစ်ခါတည်း တစ်ထိုင်တည်း ဖတ်ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ကူးသွားပြီး အိမ်မှာ ဖတ်မယ်ဆိုတော့ ဖောင့်က စကားပြောလာရော။ မြန်မာဖောင့်က ကော်ပီကူးသွားရင် အိမ်မှာဆို မပေါ်တော့ဘူး။ သိုးလေးကို အကြံပေးပါဦး။
November 26, 2007 at 5:10 AM
ဦးဦးကထိက မင်္ဂလာပါ။ ဆရာရဲ့ ဒီပို့လေးကို ဒီမှာ PDF အဖြစ်နဲ့ ထုတ်ပေးထားတယ်ဗျ။
ဦးဦးကထိကရေ ဒီပို့စ်ထဲက preposition ဆိုတာလေးကို သာမီး ငယ်ငယ်တုန်းက နေရာရှေ့ဆက်တွေဆိုပြီး မှတ်သားဖူးတယ်ဗျ အဲဒါကို ယင်းဂလိပ်လို ဘယ်လိုခေါ်လဲ စဉ်းစားနေတာ ခုမှ မှတ်မိသွားပီ အဟိဟိ သိုင်းခရု
၀င်္ကပါ (5) Ancient Chinese Stories (1) chaos (8) Common Mistakes (1) EEE (1) Grammar (3) Idioms (4) Joke (1) Links (1) MelodyMg (5) MMThinker (4) PK (3) Poem (1) Practical Usage (2) Proverbs (3) Purpose (1) Speaking (1) Translation (2) vocabulary (5) ဗမာပြည်သူ (4) အိမ့်ချမ်းမြေ့ (1)
အဓိပ္ပာယ် မတူသော စကားလုံးများ-၁
ကျွန်မ chaos ဖတ်ဘူးသမျှ၊ သိသမျှ စကားပုံ တစ်ချို့ကိ...
Confucius ရဲ့ အဆိုအမိန့်များ
Idioms သင်ခန်းစာ (၂)
Idioms သင်ခန်းစာ (၁)